China America-uhlobo abavelisi transformer kunye nababoneleli |Shengte
Ubude: 1000 m okanye ngaphantsi
Isantya somoya: ≤35m/S(akukho ngaphezulu kwe-700Pa)
Ubushushu be-Ambient: elona qondo lobushushu liphezulu +40℃, elona qondo lobushushu lisezantsi -35℃.
Ukufuma okuhambelanayo: imihla ngemihla ayithethi ngaphezu kwe-95%, inyanga nenyanga ayithethi ngaphezu kwe-95%.
I-Shockproof: ixabiso le-avareji yemihla ngemihla alikho ngaphezu kwe-0.4 / s2, ukukhawuleza okuthe nkqo akukho ngaphezu kwe-0.15mm / s2.
Ukuthambekela kwendawo yokufakela: akukho ngaphezu kwe-3 °.
Indawo yofakelo: Ufakelo kwindawo ekungekho mlilo, umngcipheko wogqabhuko-dubulo, ungcoliseko olumandla, ukonakala kweekhemikhali kunye nokungcangcazela okunobundlobongela kwendawo.
Kwimeko yokugqithisa le miqathango ingentla, ungabonisana neNkampani.
Isiguquli sodidi lwebhokisi:ilingana nodityanisiweyo (uhlobo lwebhokisi) isitishi esingaphantsi.
Ibhokisi yohlobo lwe-transformer yisakhiwo sesakhelo, idityaniswe ngentsimbi yecandelo, isakhelo sigqunywe nge-aluminiyam iplate ye-alloy, kwaye iqatywe ngepeyinti ekhethekileyo yepeyinti, ukuze ibe neempawu eziqinileyo zoomatshini, ukuxhathisa imozulu, ukuxhathisa umhlwa.Xa uhlobo oludibeneyo (uhlobo lwebhokisi) i-substation yisakhiwo esibalulekileyo, ibhokisi ihlukaniswe ngamagumbi amathathu azimeleyo kunye neepleyiti zentsimbi, ezizezi, igumbi lombane ophezulu, igumbi lokuguqula kunye negumbi lombane eliphantsi.Ukukhanyisa kwigumbi ngalinye ngokuzenzekelayo kucinywe ngokuvulwa kocango.
Kukho umaleko wokugquma ubushushu phezulu kwesitishi esidityanisiweyo (uhlobo lwebhokisi).Kwiqondo lokushisa eliphezulu kunye neendawo ezibandayo, iqondo lokushisa kwibhokisi lilula ukuqokelela kunye nokutshintsha, ngoko ke ubushushu be-insulation layer malunga nomzimba webhokisi bungongezwa. igumbi baxhotyiswe isixhobo ulawulo lobushushu oluzenzekelayo.
I-substation edibeneyo (uhlobo lwebhokisi) inokuthintela ngokufanelekileyo ukuhlaselwa kwezilwanyana ezincinci.Ukugcinwa kwe-transformer iqhutywe ngokulula kwaye ikhutshwe ngetroli ekhutshweyo.Amacala amabini esiseko somzimba webhokisi anikezelwa ngeebholiti ezine ezihambelanayo zokuphakamisa ezinokukhutshwa. kunye nokutyhalwa, kwaye amacala amabini e-eaves ephezulu abonelelwa ngezixhaso ezine ezinomsebenzi ofanayo, onokuphakanyiswa kwaye uhanjiswe ngokupheleleyo.
Idityanisiwe (ibhokisi) isitishi, yenziwe ngesixhobo sokutshintsha amandla ombane aphezulu, isiguquli sombane, isixhobo sokutshintsha amandla ombane asezantsi amacandelo amathathu adityaniswe kunye kwaye enze iseti epheleleyo yangaphandle, isixhobo sokuhambisa i-oyile. utyalo-mali oluncinci, ukufakwa ngokulula kunye nokugcinwa, ukubonakala okuhle, ukuchasana kwemozulu okunamandla njalo njalo.
Isetyenziswa kakhulu kwizakhiwo eziphakamileyo, iindawo zokuhlala, imigodi, iindawo zeoli, ukuhanjiswa kwamandla kawonke-wonke, izikhululo, iiwharves kunye namanye amashishini kunye neendawo zamandla zethutyana zokuhambisa umbane.
Itywinwe ngokupheleleyo, isakhiwo esidibeneyo, i-insulated ngokupheleleyo, inkangeleko enhle, umthamo umalunga ne-1/3 kuphela yebhokisi yebhokisi (i-European box transformer) .Akukho gumbi lokuhambisa amandla, linokubekwa ngokuthe ngqo ngaphakathi okanye ngaphandle, linokuthi libekwe kuzo zombini. macala esitrato kunye nebhanti eluhlaza, ukuqinisekisa ukhuseleko lomntu, zombini izibonelelo zombane, kodwa nokuhombisa okusingqongileyo.
Yamkela indlela epheleleyo yokukhusela uluhlu lwefuse kabini, enciphisa kakhulu iindleko zokusebenza.
Ingasetyenziselwa unikezelo lwamandla ombane kunye nonikezelo lwamandla womnatha weringi, ukuguqulwa kulunge kakhulu, ukuqinisekisa ukuthembeka kunye nokuguquguquka konikezelo lwamandla.
Intloko yentambo yomkhono we-10kV inokufakwa kwaye isuswe amaxesha amaninzi phantsi komthwalo we-200A wangoku.Ingasetyenziselwa ukutshintshwa komthwalo kwimeko yongxamiseko kwaye ineempawu zokuqhawula ukudibanisa.
Ukwamkela uhlobo lwasekhaya lwe-9, uhlobo lwe-11 yokusabalalisa i-transformers, kunye nelahleko ephantsi, ingxolo ephantsi kunye nobomi benkonzo ende.
I-transformer yohlobo lwebhokisi igxininisa ukuyila kwenguqu yendabuko kwigobolondo yohlobo lwebhokisi, eneempawu zomthamo omncinci, ubunzima obulula, ingxolo ephantsi, ilahleko ephantsi, ukuthembeka okuphezulu kunye nokunye.Isetyenziswa kakhulu kwiindawo zokuhlala, amaziko zorhwebo, izikhululo zokukhanya, izikhululo zeenqwelo moya, iifektri kunye nemigodi, amashishini, izibhedlele, izikolo kunye nezinye iindawo.
Ubushushu be-Ambient: ubushushu obuphezulu + 40 degrees, ubuncinane bobushushu -30 degrees dwarf uhlobo
Umphakamo: ngaphantsi okanye ulingana no-1000M
Iqondo lobushushu: Yonke imihla ithetha hayi ngaphezulu kwe 95[%], ngenyanga ithetha hayi ngaphezulu kwe 90[%]
Indawo yokufakela: umoya ojikelezileyo kufuneka ukhululeke kwigesi evuthayo evuthayo, umphunga wamanzi kunye nolunye ungcoliseko olucacileyo, indawo yofakelo ngaphandle kokungcangcazela okunobundlobongela.
Indawo yofakelo kufuneka ikhululeke kungcoliseko olucacileyo, uqhushumbo, irhasi eyonakalisayo kunye nothuli, kwaye indawo yofakelo kufuneka ikhululeke kwimpembelelo yobundlobongela obunobundlobongela.Inyikima yenza isantya somhlaba AG: ngaphantsi kwe-3m/s2 kwicala elithe tye kwaye ngaphantsi kwe-1.5m /s2 kwicala elithe nkqo (iingxaki zenyikima phakathi kwalo mda akufuneki ziqwalaselwe ngokukodwa kuyilo).
Ngaphambili: Umboneleli we-OEM ye-10KV yeClass S11 Series kwi-Voltage-Regulated Distribution Transformers-shengte
Okulandelayo: i-europe-type transformer
Isikhululo soMbane esiseMgangathweni oPhakamileyo...